किन असफल भयो लिम्बुवान मोर्चा ? – Rajyasatta.com
Reading Now किन असफल भयो लिम्बुवान मोर्चा ?
संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मच र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले सशक्त आन्दोलनका लागि आपसमा परामर्श गरिरहेका जनाएका छन् । ‘संघीयता नदिने षडयन्त्र भइरहेको छ । संघीयता त मागेर होइन लडेरै लिनुपर्ने रहेछ । त्यसैले सानोतिनो आन्दोलन छाडेर सशक्त आन्दोलनकै तयारीमा लागेका छौं’ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मचका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले बताए । ती राजनीतिक संगठनहरुले सशक्त आन्दोलनका लागि आपसी एकीकरणका लागि चरणवद्ध छलफल चलाइरहेका छन् । ‘मुद्दा साझा भएकाले हामी एकीकरणकै पक्षमा छौं । एकीकरण भएन भने पनि मोर्चा तयार गरेर आन्दोलनमा उत्रन्छौं’ संघीय लिम्बुवान राज्य परिषदका अध्यक्ष साजुहाङ पालुङवाले पनि यस्तै मोर्चाको पुष्टि गरे ।
लिङदेनले एकीकरण नभएपनि नयाँ मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्ने बताए । ‘पहिलेको मोर्चा खुकुलो थियो । त्यो मोर्चामा सामाजिक संस्था राजनीतिक दल सबै आवद्ध हुनाले आन्दोलन गर्न गाह्रो भयो । त्यसैले नयाँ मोर्चा चाहिएको छ’ उनले भने । गणतान्त्रिक मोर्चाले नै २०६४ फागुन १८ गते तत्कालीन सरकारको वार्ता समितिका संयोजक रामचन्द्र पौडेलसँग पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो । मोर्चामा आवद्ध नभएको पालुङवाको परिषदले पनि एक महिनापछि चैत ६ गते तत्कालिन सरकारसंग उस्तै खाले पाँच बुँदे सहमति गरेको थियो ।
पालुङवाले आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय स्वायत्तताको नारा उरालेको एकीकृत नेकपा माओवादीलगायतका ठूला राजनीतिक दलहरु समेत पूरानै संरचनाबाट मुक्त हुन नसकेको र अब तिनले बनाउने संविधान पगिनभ २०४७ सालको भन्दा फरक नहुने दाबी गरे । ‘स्वायत्त राज्यको लागि सशक्त आन्दोलन नगरी नहुने रहेछ । त्यसैले दशैंतिहारसम्म तयारी गरेर लगत्तै आन्दोलनमा उत्रन्छौं’ उनले भने । परिषदको असोज ११ गते हुने केन्दी्रय समितिको बैठक मचसम्वद्ध परिषदको असोज १७-२० मा हुने केन्द्रीय विस्तारित बैठक र दुवैबीच आपसमा हुने चरणवद्ध वार्ताले आगामी आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने बताइएको छ ।
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मच नजिकको संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद क्रान्तिकारीबीच २०६६ फागुन ७ र ८ गते एकता भएको उद्घोष भएको थियो । तर क्रान्तिकारीका अध्यक्ष मिसेकहाङ थाम्सुहाङले एकीकरण हुन बाँकी नै रहेको बताएका छन् । ‘एकता भएको छैन । एकताका लागि आपसमा छलफल भइरहेको मात्र हो’ उनले भने ।
स्थापनाकालमा परिषद २०६२ मंसिर २७ गते गठन भएको संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय माचको भातृ संगठनको रुपमा थियो । माचबाट अलग्गिएका लक्ष्मण थारुको नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टी गठन भएको छ । नयाँ पार्टीले राजकुमार नाल्बोको नेतृत्वमा संघीय लिम्बुवान स्वायत्त परिषद गठन गरेको छ । ‘चारवटै परिषदमा नीतिगत मतभेद चािहं छैन । तर ब्यक्तिगत कारण एउटै उद्देश्य भएका यी मोर्चाहरु कहिल्यै एउटा झण्डाुमनी अटाउन सकेनन् । त्यसैले के भन्न थालिएको छ भने जातीय आन्दोलनमा अग्रस्थानमा देखिएको लिम्बुवान राजनीतिको राप र ताप जति चर्का छ त्यति नै कमजोर त्यसको प्रभाव र अदुरदर्शितामा छ । फुटाऊ र राज गर सिद्धान्तले असाध्यै आक्रान्त लिम्बुवान राजनीति दिन दुई गुना रात चौगुना प्रभावशाली हुनुपर्नेमा झन कमजोर हुदैं गैरहेकोछ ।
डम्बर लाओतीले नेतृत्व गरेको माचले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ८ र १३ बैशाख २०६३ गरेको सम्बोधनमा ‘जनताको नासो जनतालाई नै फिर्ता गरको’ भनेको आधारमा लिम्बुवान स्वतन्त्र राष्ट्र भएको दाबी गर्दै आएको थियो । उसले चन्दा कर संकलन गर्ने तथा आफ्नो सरकारमा संघसंस्था दर्ता गर्नुपर्नेजस्ता उर्दी जारी गर्दै आएको थियो ।
लिम्बुवान राज्य प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्ने राजनीतिक संगठनहरुले आफ्नो आन्दोलन जातीय नभएको दाबी गर्दै आएका छन् । तत्कालीन राजाले पटकपटक आक्रमण गर्दा पनि जित्न नसकेपछि १८३१ साउन २२ मा संझौता लालमोहर गरेर लिम्बुवानलाई संरक्षित राज्यसरह रहनेगरी स्वायत्तताको अधिकार दिएको र २०२१ सालसम्म भूमिसुधार ऐन लागू हुनुपूर्व लिम्बुवानले स्वायत्तता उपभोग गरेको लिम्बुवानजन्य संगठनहरुको दाबी छ । लालमोहरलाई जबर्जस्ती मिचिएको बताउँदै त्यही लालमोहरका आधारमा लिम्बुवान हुनुपर्ने उनीहरुले बताउँदै आएका छन् । ‘हामीले लिम्बुवान भूमिको मुक्ति चाहेका हौं’ परिषदका अध्यक्ष पालुङवाले भने ।
लिम्बुवानको माग गर्दै आन्दोलनमा अगाडि देखिएका तीनवटै लिम्बुवान परिषदको अवधारणाअनुसार लिम्बुवान स्वायत्त राज्यमा जातीय धार्मिक लिङ्गीयआधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने सिमान्तकृत वर्गलाई स्वायत्त इकाईहरुमार्फत अधिकारसम्पन्न बनाउने बहुभाषिक नीतिअनुसार सबै मातृभाषा राष्ट्रभाषा हुनेछ । ‘लिम्बुवानमा लिम्बू नै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने छैन । लोकतान्त्रिक प्रकि्रयाबाट जित्नै नै मुख्यमन्त्री हुन्छ । त्यसैले लिम्बूबाहेककाले चिन्ता मान्नुपर्ने कारण नै छैन’ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय पार्टीका मुकुम नेम्वाङ भन्छन् ।